DHANURASANA (BOW POSE) စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေရန် - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ကျန်းမာရေး
ယောဂ - ၀ ိညာဉ်ရေးရာ
အိမ် - N- ဥယျာဉ်
စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန် Dhanurasana (Bow Pose)
အားကစား Anirban Lahiri က RBC အမွေအနှစ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသည်
နည်းပညာ Reliance Jio၊ Airtel, Vi နှင့် BSNL မှစတင်သည့်အဆင့်အတန်းများအချက်အလက်စာရင်း
သတင်း Kumbh mela ပြန်လာသူများသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သော Sanjay Raut ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်
ရုပ်ရှင်များ COVID-19 ကြောင့်တရားရုံးမှ Vira Sathidar Aka Narayan Kamble ကွယ်လွန်သွားသည်
မော်တော်ကားများ Kabira Mobilityes Hermes ၏ ၇၅ မြန်နှုန်းမြင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပို့ဆောင်ရေးလျှပ်စစ် Scooter ကိုအိန္ဒိယတွင်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ဘဏ္ာရေး ရွှေစျေးကျသော်လည်း NBFC များအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိ, ဘဏ်များသည်နိုးနိုးကြားကြားရှိရန်လိုအပ်သည်
ပညာရေး CSBC Bihar ရဲတပ်ဖွဲ့ Constable နောက်ဆုံးရလဒ် 2021 ကြေညာခဲ့သည်
ခရီးသွားခြင်း Aprilပြီလမဟာရပ်ရှတွင်လာရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
နေအိမ် ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး ကျန်းမာ oi-Luna Dewan အားဖြင့် Luna Dewan သြဂုတ်လ 19, 2016 တွင်
သင့်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများစေပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီးသင်ဘာလုပ်ရမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်သွားရမည်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်မသိပါ။ ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ယောဂသည်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ Dhanurasana သည်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်သက်သေပြထားသောလူသိများသောယောဂ asanas တစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုသည်ယနေ့ခေတ်လူတို့ကြုံတွေ့နေရသောပြproblemsနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းစဖွင့်လိုက်သောကလေးများမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူများသက်ကြီးရွယ်အိုများအထိစိတ်ဖိစီးမှုလုံးဝမခံစားရပါ။ လေ့လာမှုများ၊ အလုပ်ဖိအားများ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ မိသားစုဘဝစသည်တို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: Dandasana သည်သိပ္ပံနာကျင်မှုအတွက်
အနိမ့်ကျောရိုးအဘို့အယောဂ: Akarn Dhanurasana | Aakrana Dhanurasana | Boldsky
ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းရန်မှာယောဂကျင့်ရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၏ပြင်းထန်မှုကိုအချိန်မီနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ မရရှိလျှင်၎င်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစေနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: ခိုင်ခံ့သောပြန်သွားရန်ယောဂ Asana
Bow Pose ဟုလည်းလူသိများသော Dhanurasana ကို Sanskrit ဟုခေါ်သော Dhanu ဟူသောစကားလုံးမှဆင်းသက်လာပြီးဆိုလိုသည်မှာလေးနှင့် Asana ဟူသည် pose ကိုဆိုလိုသည်။ Dhanurasana လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်ဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ဦး
Dhanurasana လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်ဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း -
ယနေ့ sagittarius ဟောကိန်းထုတ် ganesha များအတွက် horoscope
၂။ သင်၏အစာအိမ်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်ဖိ။ ဖြည်းဖြည်းလေးအိပ်ပါ။
၃။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လက်များကိုဖြေလျော့။ ထားသင့်သည်။
5. အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ ရင်ဘတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြှောက်ပြီးသင်၏လက်များကိုခြေထောက်ပေါ်ဆွဲတင်ပါ။
၈။ ရာထူးကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှကြာအောင် ထား၍ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။
မိုက်ကရိုဝေ့ (ဗ်) မီးဖို၌ upma လုပ်နည်း
Dhanurasana သည်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်ကူညီသော်လည်းသတိထားသင့်သည်။ လည်ပင်းနှင့်ကျောအောက်ပိုင်းနာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာများရှိသူများ၊ သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းများရှိသူများသည် Dhanurasana လေ့ကျင့်မှုကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ လေ့ကျင့်ထားသောယောဂကျွမ်းကျင်သူ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်သာလေ့ကျင့်သင့်သည်။
Dadabhai Naoroji မွေးနေ့ - အိန္ဒိယတရားဝင်သံအမတ်အကြောင်းအချက်အလက်များ
စပ်ခရမ်းချဉ်သီးသီဟိုCur်ဟင်း - Diwali အထူး!
ကက်ထရီနာ Kaif ရဲ့5မင်္ဂလာဆောင် - ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်နာ Lehengas သင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်ရန်လိုအပ်အားလုံးသည်
ဆံပင်မှအဆီပိုလျှံမှုကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်း ၅ နည်း
နွေရာသီတွင် Dandruff ကိုတိုက်ဖျက်ရန် ၁၀ ခု
The Look of the Day - Kalki Koechlin သည် LBD တွင် Kazo A / W စုဆောင်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်
အဆိုပါလူနေမှုပုံစံစတဲ့, အလှအပ, ဖက်ရှင်နှင့်ကျန်းမာရေးအကွံဉာဏျနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းနှင့်အတူယနေ့အထိသငျသညျထကျကိုစောငျ့ပါမညျသောဤလူနေမှုပုံစံစတဲ့ Site ကို။
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေနေ့၏အဓိကအကြောင်းအရာကားအဘယ်နည်း
moong dal payasam လုပ်နည်း
© 2021. All Rights Reserved. pamperedpeopleny.com | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ